Archive du 20200323
Coronavirus 12 no voa, 900 araha-maso
Niampy olona 9 vaovao ny voamarina fa mitondra ny coronavirus, izay nandeha tamin'ny sidin’ny Air France AF 934 avokoa, ka ny ankamaroany dia ny 19 martsa, ary ny iray tamin’ny 17 martsa,
AREMA Niova endrika !
Tontosa soa ny zoma 20 martsa 2020 lasa teo ny Kongresy Nasionaly ny Antoko AREMA tao amin’ny FOFIKRI Ankadikely Ilafy, izay nandraisan’ireo mpikatroka manerana ny Nosy anjara. Solontena telo isaky ny distrika no nandrafitra ny lisitry ny mpizaika tamin’izany.
Jean Edouard Rajaonarison « Tsy misy taranaka MDRM ireo mpitondra ankehitriny »
Nisy fomba fijery miisa 2 niavaka tsara ny fanazavana ny raharaha 29 martsa 1947, hoy ny mpampianatra mpikaroka momban’ny Haiolona politika na “Anthropologie politique”, Jean Edouard Rajaonarison.
Fiatrehana COVID-19 Fanarahana torimarika no fanafodiny…
Sarotsarotra tato ho ato ny fahitan-tory, samy malahelo, samy mitaintaina, samy matahotra ny aretina COVID-19 taorian` ny fanambarana fa misy tranga voamarina eto Madagasikara.
Valanaretina Coronavirus Azo araraotina hamadihana ny tantara
Mihotakotaka izao tontolo izao, noho ny tahotra an’ilay valanaretina coronavirus. Na izany aza dia misy ihany ny lafitsaran-javatra azo sintonina.
Filaharana etsy sy eroa Fiatombohan’ny krizy ara-toekarena
Sahirana tanteraka ny vahoaka Malagasy indrindra ny teto Antananarivo manoloana ny tahotry ny aretina Coronavirus sy ny mety ho fiantraikan’izany.
Tahirin-tsakafo Ilaina ny mifampitsinjo…
Niantsena sy nanao tahirin-tsakafo ny tomponandraikitra ambony any Alemana, Angela Merkel, ny sabotsy lasa teo tao aminà tsena lehibe iray.
Tsy mahazo mivoaka ny trano Tsy hisy taksibe miasa manomboka anio
Mijanona any an-trano avokoa ny rehetra. Misy fepetra maro tsy maintsy hapetraka. Mijanona tanteraka ny fitateram-bahoaka an-tanàn-dehibe (Taxi, taksibe,…) sy ireo mampifandray an’Antananarivo sy ny faritra, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Voasary makirana Niaka-bidy 100% ny tany am-potony
Hatrany am-potony, araka ny filaza, manamorona ny RN4 iny, no efa tsikaritra ho nidangana izay tsy izy koa ny vidin’ny voasary makirana saingy mbola nisy ka nifandrombahan'ireo mpandeha amin'ireo fiara mandalo izany ny alahady teo.
ALASORA Nofehezina tao anatin’ny 5 minitra ny fisoratam-panambadiana
Saika nofoanana avokoa ireo karazana hetsika famoriam-bahoaka nanomboka ny Sabotsy teo. Ankoatra ny fivoriam-bem-pokonolona dia voakasika ihany koa ny fisoratam-panambadiana sy ny mariazy.
Fifandraisan-davitra Ho hatsaraina ny fiasan’ny 4G+
Ho hatsaraina ny fiasan’ny 4G+ an’ny Telma, raha ny fampitam-baovao avy amin’ity orinasam-pifandraisan-davitra ity omaly.